दुबै मोहडाबाट सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने विश्वकै पहिलो महिला पत्रकार ‘कल्पना महर्जन’ – Namaste Host
दुबै मोहडाबाट सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने विश्वकै पहिलो महिला पत्रकार ‘कल्पना महर्जन’
March 20, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on दुबै मोहडाबाट सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने विश्वकै पहिलो महिला पत्रकार ‘कल्पना महर्जन’
विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको दुवै मोहडा(दक्षिणी २०७५ ज्येष्ठ ९ गते) र तिब्बती मोहडा (उत्तरी २०७६ ज्येष्ठ ९ गते) दिन आरोहण गर्न सफल ललितपुरकी पत्रकार कल्पनामहर्जनले विश्वको पहिलो महिला पत्रकार सगरमाथा आरोहीको परिचयसहित नाम लेखाउन सफल भएकी छिन्।
सगरमाथा आरोही कल्पना महर्जनलाई बुधवार ललितपुर महानगरपालिकाले नगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनको सभापतित्वमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सङ्घीय गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र वर्ल्ड बुक अफ नेपालका अध्यक्ष सागर कटवालले संयुक्त रूपमा विश्व कीर्तिमानको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए।
उनले सन् २०१९ मे २३ (उत्तरी २०७६ ज्येष्ठ ९ गते) का दिन शिक्षाको माध्यमबाट बालविवाह रोकथाम अभियानको उद्घोष सगरमाथाको शिखरबाट गरेका थिए।
सोही समयमा ललितपुर महानगरपालिका स्थापना भएको १००औँ वर्ष मनाउँदै गरेको र वाड.मय शताब्दी पुरुष डा. सत्यमोहन जोशीको पनि १०० औँ वर्षको जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा ललितपुर महानगरपालिको लोगो अंकित झन्डा र सत्यमोहन जोशीको फोटो सगरमाथाको शिखर फराउन आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको थियो । ललितपुर महानगरपालिकाको गौरवशाली योजना अन्तरगत कल्पना महर्जनले सगरमाथाको शिखरमा चुम्न सफल भएकोले यो वर्ल्ड बुक अफ रेकर्डको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण कार्यक्रम पनि नगरपालिका आफैले आयोजना गरेको हो।
पूर्वराष्टिपति रामवरण यादवले कल्पना नेपाल र नेपालीको लागि गौरव भएको बताए । शिक्षा मार्फत बालबिवहा रोकथामको लागि कल्पनाले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै उनले वातावरण संरक्षणमा पनि काम गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ग्लोबल वार्मिड.ले हिमालहरू पंग्लिदै गएर काल पत्थर हुँदै गएका छन् । हिमालको हिउँ जोगाउन के गर्न सकिन्छ, त्यस तर्फ काम गर्नु अत्यावश्यक छ।
त्यसै गरी ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख महर्जनले ललितपुरकी चेली कल्पनाले हिमाल चढेर विश्वमा नेपाल र ललितपुरको नाम उच्च बनाएको बताए । उनले ललितपुर महानगरपालिकाको खुल्ला क्षेत्र र हरियालीको लागि पार्कहरू निमार्ण गरिरहेको बताए । उपप्रमुख गीता सत्यालले महिलाले अवसर पाए चुनौतीपूर्ण भनिएका काम गर्न सक्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण कल्पना महर्जन भएको बताइन् । सगरमाथा चढेर कल्पनाले ललितपुरलाई विश्व सामु चिनाएको उनले दाबी गरिन्।
सगरमाथा आरोही कल्पना महर्जनले सबैको सद्भाव, शुभेच्छा र सगरमाथा आरोहण व्यवस्थापन ऐक्स्पेरियन्स आउटसोर्स नेपालको कुशल ब्यवस्थापनले मात्र सफल आरोहण सम्भव भएको बताइन् । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सफलतापूर्वक आरोहण गरे पनि सामाजिक सगरमाथा चढ्न कठिन भइरहेको बताइन । उनले ललितपुरको सामुदायिक विद्यालय शिक्षा र बालबिवहा विरुद्ध काम गरिरहेको जानकारी दिइन्।
वर्ड बुक अफ रेकर्ड नेपालका अध्यक्ष सागर कटवालले कल्पना नेपालको गौरव भएको बताए । महिलामा अपार क्षमता भएको बताउँदै समाजले त्यसको मूल्याङ्कन गर्न नसकेको स्पष्ट पारे।
शिवरात्रिको दिनबाट छोरो बेपत्ता भयो ,आमा बुवा रुदैरुदै मिडियामा (भिडियो हेर्नुस्)